प्रदेश २ का लागि छापिएला 'छाता' सहितको मतपत्र?
मनोज सत्याल काठमाडौं, असार २३
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनअघि राजपा नेपालले चुनाव चिह्न 'छाता' सहित आयोगमा निवेदन बुझाएको हो।
राजपाले दलीय बैठकहरुमा राजनीतिक मुद्दासँगै एउटै चुनाव चिह्न 'छाता' सहितको मतपत्रको विषय उठाउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोग भने उसको मागप्रति सकारात्मक छैन। यो अवस्थामा राजपाले निर्वाचनमा जान आफ्नो चुनाव चिह्नलाई पनि मुद्दा बनायो भने आयोगले छातासहितको मतपत्र छाप्ला त?
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव राजपालाई सहभागी गराउने विषय र नयाँ मतपत्र छपाइबारे टिप्पणी गर्नबाट पन्छिए। 'अनुमानका विषयमा प्रमुख आयुक्तले टिप्पणी गर्न मिल्दैन,' उनले भने।
आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल भने नयाँ मतपत्र छाप्न समय नभएको बताउँछन्।
'संविधान, कानुन, समय र हामीसँग भएको प्रविधिले पनि नयाँ मतपत्र छाप्न सकिने अवस्था छैन,' निर्वाचनको व्यवस्थापन पक्ष हेरिरहेका दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
यति हुँदाहुँदै असोज २ गतेसम्म प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्नै नसक्ने अवस्था भने छैन।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा राजपा नेपाल दर्ता नै नभएको अवस्थामा केही भन्न नसके पनि बाटो बन्द भएको मान्दैनन्।
'अहिले नै मतपत्रबारे भन्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'पहिले राजपा निर्वाचनमा आउनुपर्‍यो, दर्ता हुनुपर्‍यो, चिह्न माग्नुपर्‍यो अनि बल्ल आयोगले टिप्पणी गर्छ।' मतपत्र छपाइले आयोगको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
छाता नपाए अरु चिह्नको विकल्प
राजपाले छाता नपाए पनि प्रत्येक जिल्लामा छुट्टाछुट्टै चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने बाटो यसअघि कानुनी रुपमा खुलिसकेको छ। राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले जेठ २८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो।
उक्त ऐनको दफा १० मा भएको संशोधनले राजपालाई एकीकृत हुनुअघिका दलहरुका छुट्टाछुट्टै र एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर प्रत्येक जिल्लामा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलेको थियो। यसअनुसार राजपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि पनि पर्सामा तत्कालीन सद्भावना पार्टीको 'हात' चुनाव चिह्न पाउन सक्छ भने सिरहामा तत्कालीन तमलोपाको 'हल गोरु' चिह्न पाउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २३, २०७४, ०८:१०:५२